မင်းသားမဖြစ်ခင် ဒုရဲအုပ်ဘဝတုန်းက အမှတ်တရတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဦးဝင်းမြိုင် – အနုပညာရပ်ဝန်း
သူကတော့ ဒီနေ့မှာ ငယ်ငယ်တုန်းက ဓာတ်ပုံပေါင်းတွေကို ပြန်ကြည့်ရင်း မင်းသားမဖြစ်ခင် ဒုရဲအုပ်ဘဝနဲ့ကျင်လည်ခဲ့တုန်းက အချိန်တွေအကြောင်း ပရိသတ်တွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” (၁၉၈၁) ခုနှစ် ဒုရဲအုပ်လောင်းသင်တန်းဆင်းပြီး အလုပ်သင်ဒုရဲအုပ်အဖြစ်ဖြူးရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျ အသက်က (၂၇)…. မမျှော်လင့်ဘဲ ဓါတ်ပုံလေးပြန်တွေ့တော့ အတိတ်ပုံရိပ်လေးတွေ ပြန်ပေါ်လာတယ်…. မှတ်မှတ်ရရ ဖြူး သင်္ကြန်နဲ့စတွေ့…. လူပုံက ဖြူနွဲ့နွဲ့ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်မှာတာဝန်ကျတော့ အမူးသမားအုပ်စုနဲ့ ဖိုက်တင်ပလေးရရော….. ဖောင်ကြီးသင်တန်းမှာ လိုက်ဝိတ်တန်း လက်ဝှေ့ ရွှေတံဆိပ်ရှင်လေ….. လက်ရည်ကို မြို့နယ်ကောင်စီလူကြီးတွေ